‘Udoti webhanoyi’ ubhodloze uphahla | IOL Isolezwe
‘Udoti webhanoyi’ ubhodloze uphahla
Isolezwe / 27 July 2012, 1:39pm /
Uphahla lwendlu ebhodlozwe iqwa elingaziwa.
MNUZ Mbatha waKwamashu ka-D, ngesikhathi ekhombisa, iqwa elibhodloze uphahla lwendlu yakhe. Langena egunjini lokulala.
UDIDEKILE umndeni waKwaMashu, esigcemeni sakwa D obhodlokelwe wuphahla lwendlu ngenxa kadoti obusuphenduke iqhwa okusolwa ukuthi ungudoti ophuma emathoyilethi asemabhanoyini.
Namanje abakwaMbatha abakaqondi ukuthi bazowubiza ngani umshophi obehlele lapho kubhodloke indlu yabo ngoLwesibili emini ibhodlozwa yinto engaziwa.
UMnuz Linda Mbatha (44) uthe uzwe umsindo omkhulu ukhala endlini wangaqonda ukuthi yini.
Uthe uzitshele ukuthi kungenzeka kube ukuqhuma kwebhomu.
Kepha umangele lapho engena endlini engaboni maka wokusha.
“Ngaphandle bekuneqhwa eliluhlaza obekungaqondakali ukuthi liyini. Kuthe uma sibheka indlu sangabona ukuthi yini okungabe ibange ukubhodloka kophahla lwendlu,” kusho uMbatha.
Kunalokhu kuya ngokudida okwenzeke kulo muzi. Uthe bafikelwe amalungu ophiko lwezinhlekelele abatshele ukuthi kungenzeka kube udoti ovela emathoyilethi amabhanoyi odedelwa endaweni engenalutho uma ibhanoyi liphezulu.
UNkk Busi Mbatha (44), uthe bafuna incazelo ngokwenzekile.
“Okusiphatha kabi ukuthi uma lokhu kuyiqiniso kusho ukuthi asiphephile njengamalungu omphakathi ohlala kule ndawo. Ukube lento iwele egcekeni kudlala izingane kuyacaca ukuthi ngabe zilimele,” kusho uNkk Mbatha.
Uthe aboMnyango weziNhlekelele bathe bazoluthatha lolu ketshezi bayoluhlola ukuze kutholakale ukuthi beluqhamukaphi.
“Incazelo esiyithole komunye wabo ukuthi kungenzeka kube udoti ovela ethoyilethi lebhanoyi. Uthe njengoba lodoti ungaphumi uyahlala ube yiqhwa bese udedelwa endaweni engenabantu. Kepha asazi noma kuyiqiniso yini leli ngoba bathe bazowahlola lamanzi abeconsa ophahleni,” kusho uNkk Mbatha.
UMnuz Collin Naidoo wenkampani engamele ukusebenza kwesikhumulo sezindiza, i-Airports Company South Africa, uthe abazi bona ngalolu daba. Uthe ngokwazi kwabo amabhanoyi ahlanzwa kukhishwe wonke udoti uma esefike lapho eya khona.
Uthe akulula ukuthi babone ukuthi lolu ketshezi ebeluyiqhwa okuthiwa lubhodloze uphahlwa lwalendlu beluvela ebhanoyini.
Uqhube wathi bona abakwazi ukulawula okwenziwa yizinkampani zamabhanoyi emoyeni, balawula ezikwenza esikhumulweni kuphela.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uMnuz Vincent Mdunge ukuqinisekisile ukuthi lesi sigameko sibikiwe. “Esikutholile okwamanje ukuthi uketshezi lolu olutholwe amaphoyisa luhanjiswe ukuthi luyocwanigwa e-King Shaka International Airport,” kusho uMdunge.